Rose of Sharon: Happy Blogger's Day (31st August)
Posted by rose of sharon at 9:22 AM
Sonata Cantata September 1, 2013 at 12:35 PM
ဘလော့ဂ်ပို့လေးတွေမှာ ရင်ထဲရှိတာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ချရေးတတ်တဲ့ ရို့စ်ရဲ့ စိတ်သဘောလေးကို မြင်နေရတယ်...အဖြူရောင်လေး
seesein September 1, 2013 at 1:27 PM
များများရေးနိုင်ပါစေ.........ဘလော်ဂါမောင်နှမများနှင့်ရရှိခဲ့သည် ခင်မင်မှုကိုတန်ဖိုးထားပါသည်......အားပေးတဲ့သူများကလည်း ခင်မင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါသည်.....:P
“ပုံနှိပ်လောကထဲမှာစာရေးရင်သာတကယ့်စာပေထင်သူများအကြားမှာ ဘလော့ရေးတယ်လို့ပြောရမှာ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်“... ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကို သဘောကျလိုက်တာ။
၀ါသနာပါတဲ့ စာလေးတွေ ရေးသွားနိုင်ပါစေဗျာ...
ရွှေအိမ်စည် September 1, 2013 at 2:43 PM
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စာလေးတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ မမ
PhyoPhyo September 1, 2013 at 3:01 PM
ချစ်စရာခလေးတို့ရဲ့ မေမေ ရိုစ့် ချစ်စရာမိသားစုနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်၊
Yan September 1, 2013 at 3:20 PM
ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ Sis ရေ. ဒီပို့စ်လေးကို Blog Digest လေးမှာ အမှတ်တရ ရှဲလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆုံကြတာပေါ့. :)
လသာည September 1, 2013 at 3:32 PM
ဘလော့မှာရော အပြင်မှာပါ ခင်မင်ရသော ချစ်ဘလော့ဂါလေးပါ။ အရင်လိုပဲ အချိန်ရတိုင်း ပိုစ်တွေ အများကြီးဆက်ရေး နိုင်ပါစေ။
Kai September 1, 2013 at 3:40 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! September 2, 2013 at 12:21 AM
မမရေ... Happy Blog Day ..ပါလို့ ..နောက်ကျမှရောက်လာတယ် ...:)
ဟန်ကြည် September 2, 2013 at 2:21 AM
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘလောဒေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါရစေဗျား...
Thain Garra September 2, 2013 at 9:47 AM
သစ္စာတရား အတိုင်း ဆက်လက် ရပ်တည်နိူင်ပါစေ ... ခင်ဗျာ ... blogging ကို ခင်တွယ်တဲ့ ... blogger ဖြစ်ကြောင်း ... အမှန်တကယ် ... ထိုစိတ်များအတွက် ... ဦးညွှတ်မိပါကြောင်း ... blog day အမှတ်တရ စာလာဖတ်ရင်း ...
မိုးငွေ့........ September 2, 2013 at 9:57 AM
တခါရေးခဲ့ဖူးပြီးမို့လို့ ခုရေးဖို့ဖီလင်မလာဘူးဖြစ်နေတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂါတွေ ဖဘမှာချည်းပဲ ဖလန်းဖလန်းမထဘဲ စာများများရေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်...။
လရိပ်အိမ် September 2, 2013 at 10:37 PM
အမရေ လာတာ နောက်ကျသွားတယ် ၊ ဟိုရက်က မောင်လေးအိမ်ရောက်တည်းက ဖတ်မိတယ် ၊ ကွန်မန့်မရေးမိတာ။
လက်နာနေတာရော ၊ စုံနေတာဘဲ။ :))
မြသွေးနီ September 4, 2013 at 12:15 PM
ရိုးရှင်းပွင့်လင်းတဲ့ ဘလော့ပို့စ်လေးကို နှစ်သက်မိရကြောင်းပါ...။
ကွန်နက်ရှင်နှိပ်စက်လို့ အခုမှ ရောက်ရပါတယ်...
An Asian Tour Operator September 4, 2013 at 3:28 PM
San Htun September 5, 2013 at 12:16 AM
တူတယ် မရို့ စ် ကျွန်မ ခံယူချက်နဲ့ ...